HomeEnglandSababta Ay Berri Isugu Naf-Baxayaan Arsenal Iyo Tottenham – Laba Ruug Cadaa Oo Ka Jawaabaya
Kooxda Tottenham ayaa berri gurigeeda ku marti gallin doonta kooxda ay isku Xaafada yihiin sida weyna u xafiil tamaan ee Arsenal , wakhti labada kooxood ay u dhexeeyaan kaliya 6 dhibcood oo faraq ahi.
Wiilasha uu hor kacayo Arsene Wenger , oo horyaalka kaga jira kaalinta saddexaad , ayaa la filayaa inay kula dul dhici doonto kooxda Spurs, cadhadii ay ka qaaday guuldaradii Munich ee horyaalka Champion-ka.
Laakiin kooxda Tottenham ayaan lafteeda la malayn karin waxay yeeli doonto maadaama ay qabto ciilkii habeen hore ee Benfica kaga soo adkaatay horyaalka labaad ee naadiyada Qaarada Yurub ee Europa League oo ay 3 – 1 ku soo quusisay.
hadaba iyagoo labada naadiba cadho debnaha ruugaya , waxay shabakada ciyaara caanka ku ah ee Goal.com, kulanka ka hor la kulantay laba shaqi oo si weyn aqoon ugu leh labadan kooxoodba . waa weeraryahankii hore ee kooxda Tottenham , Paul Walsh iyo Tababarihii hore ee Arsenal iyo Tottenhamba ee George Graham.
Shabakadu waxay labadoodaba weydiisay Su’aal qudha oo ahayd Tan :
Kooxdee Guusha u Haliilaysa Labada Naadi.?
Paul Walsh : ” Haddii ay Tottenham badin weydo , waxay iska ka samri doonaan ka qayb galka Chamions Leugue ee sanadka dambe. haddii ay dhibcaha Axada qaataana, waxay haystaan fursad dahab ah, waanay soo bixi karaan. waxay ila tahay waa ciyaar aan waxba la isula hadhi doonin.
“Mushkiladuse waxay tahay , Arsenal ayaa sanadkan awood xad dhaaf ah leh , xataa iyadoo ay ciyaaryahano ka dhaawacan yihiin, qaab ciyaareedkeedu waa mid shiiqin kara oo dhulka jiidi kara Spurs.”
George Graham: ” Waa kulankii ugu adkaa ee kooxaha ku xafiiltama Woqooyiga London dhex mara intii Mudo ah imika, maxaa yeelay, waxaynu ku jirnaa bishii March, Arsenalna waxay u xaydan tahay horyaalnimada, Spurs na waxay ku dedaalaysaa kaalinta Afraad uun.”
“Labada kooxood midna ma rabo guuldarada, xataa barbardhacu midkoodna qiimo uma laha. xili ciyaareedku bilowgiiba waa soo dhaweeyey Arsenal, laakiin bilahan oo kale waa kuwa ugu adag ee la wajaho iyadoo ay barbar ordayaan Chesea iyo Man City.”
Xulka Carruurta Chelsea Oo Amakaag Ku Riday Xidigaha Waaweyn Ee The Blues.!!